Motorola na-ekwuputa Moto G Stylus (2021) ọhụrụ, Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021) | Gam akporosis
Motorola na-ekwuputa Moto G Stylus (2021) ọhụrụ, Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021)
Motorola ekpebiela na mmalite nke 2021 ịkpọsa a ngụkọta nke ọhụrụ atọ ọhụrụ ngwaọrụ na-eche banyere n'etiti-nso ntinye na Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021). Ọ na-eme nke a mgbe ọtụtụ nkwụsị nke ekwentị atọ sitere na isi mmalite dị iche iche.
Onye kachasị ike n’ime atọ ahụ bụ Moto G Stylus, a na-emegharị ya na nnukwu ihuenyo, Moto G Power batara na batrị dị mkpa na Play pụtara maka imegharị ụda dị elu. Ha ga-abata na elekere ole na ole sochirinụ n'ọtụtụ ahịa na mbido, mgbe ahụ ha ga-erute ndị ọzọ, nke bụ Spain.
1 Moto G Stylus (2021), mmeghari ohuru na ike
2 Moto G Power (2021), ntinye ntinye na-adọrọ mmasị
3 Moto G Play (2021), uzo di ala eji eme ihe ubochi niile
Moto G Stylus (2021), mmeghari ohuru na ike
N'ime atọ ahụ, ọ bụ nke a na-akụ na ngwaike ka ukwuu, Moto G Stylus (2021) na-ejide usoro mara mma nke ọma ma dị mma. Ihuenyo bụ 6,8 sentimita asatọ na mkpebi Full HD + na mkpa dị na Stylus wuru n'ime otu akụkụ ya.
El Moto G Stylus (2021) biara na ihe nhazi Snapdragon 768, mmalite nke Snapdragon 765, ihe eserese eserese bụ Adreno 615 nke na-enye ya ike, ọ na-etinyekwa 4 GB nke RAM na 128 GB nchekwa. Batrị nke ekwentị a bụ 4.000 mAh na ibu bụ 10W, ọ bụghị oke ọsọ maka oge ahụ.
Ọnụ ya na kamera anọ, nke isi bụ 48 MP, nke abụọ bụ 8 MP n'obosara, nke atọ bụ 2 MP nnukwu na nke anọ nke 2 MP dị omimi, n'ihu bụ 16 MP. Usoro a bu Android 10 ya na Motorola interface, ọ bụ ngwaọrụ 4G, nke nwere Wi-Fi, Bluetooth na onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ.
IKIRU 6.8-anụ ọhịa IPS LCD na Full HD + mkpebi (2.400 x 1.080 px)
Nhazi Snapdragon 678
Graf Adreno 615
Gbanwee CAMERA 48 MP f / 1.7 isi ihe mmetụta / 8 MP f / 2.2 mbara-n'akuku mmetụta / 2 MP f / 2.4 nnukwu ihe mmetụta / 2 MP omimi sensor
CAMERA N'IHU 16 MP f / 2.2
Njikọ LTE / 4G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS
Mkpụrụ na arọ: 170 x 78 x 8.9 mm / 213 gram
Moto G Power (2021), ntinye ntinye na-adọrọ mmasị
El Moto G Power (2021) nzo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru ezu ma na-enweghị mkpa bezels, gburugburu bụ 6,6 sentimita asatọ na mkpebi HD +. Smartphone ahụ na-emezigharị atụmatụ ahụ kpamkpam, ha niile na-elekwasị anya na ahụmịhe nke ihe ọ na-egwu na ịkụ nzọ na batrị 5.000 mAh na ụgwọ 10W.
Moto G Ike (2021) ị na-ekpebi na nhazi Snapdragon 662, ọ bụghị otu n'ime ihe kachasị ọhụrụ mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Adreno 610 dị ka GPU. Ebe nchekwa RAM bụ 3/4 Gigabytes, ebe nchekwa ahụ na-anọgide na 32/64 GB, ha niile nwere ohere ịgbasa ya.
Ama ama tinyere ngụkọta nke ihe mmetụta atọ, nke mbu bu 48pipixels, ebe akwadoro ya abuo, nnukwu nke 2 megapixels na nke atọ nke bụ omimi nke 2 megapixels. Ihu ihu bụ nke ụdị 8 megapixel selfie. Ọ bụ ekwentị 4G, ọ na-abịa na Wi-Fi, Bluetooth na GPS. Ihe mkpisi aka na-agụkwa azụ.
MOTO G IKE (2021)
IKIRU 6.6-anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi HD + (1.600 x 720 px)
Nhazi Snapdragon 662
Ohere TERLỌ N'IME 32/64 GB na oghere MicroSD
Gbanwee CAMERA 48 MP Isi ihe mmetụta / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Omimi ihe mmetụta
UMUAKA 5.000 mAh
Mbibi na ibu ibu 165 x 76 x 9.3 mm / 206 gram
Moto G Play (2021), uzo di ala eji eme ihe ubochi niile
El Moto G Play (2021) ga-apụta maka nnwere onwe, na-ekwe nkwa inwe nnwere onwe nke ụbọchị zuru ezu na-enweghị akwụ ụgwọ, ebe batrị bụ 5.000 mAh na ibu 10W. Ihuenyo bụ 6.4 sentimita asatọ na mkpebi HD + na mkpebi nke pikselụ 1.600 x 720 na nchapụta nke na-agaghị agafe 100 nits.
Moto G Play (2021) kpebiri itinye ihe nhazi Snapdragon 460 na ihe osise Adreno 610, nchekwa ahụ bụ 32 GB, ọ dịghị okwu banyere oghere, mana ihe niile na-egosi na ọ ga-etinye ya. Batrị ahụ e kwuru n'elu bụ otu ihe ahụ dị ka nke Moto G Ike yana n'ihi eziokwu ahụ bụ na CPU na-eji ọnụ ahịa dị oke ala eme ya ka ọ bụrụ nhọrọ dị mkpa.
Igwefoto azụ dị abụọ, nke mbụ bụ 13 megapixels, nke abụọ bụ 2 megapixels miri emi, ebe ihu dị naanị 5 megapixels. Dị ka abụọ ndị gara aga, ọ bụ ngwaọrụ 4G, nke nwere Wi-Fi, Bluetooth, GPS na jaakpu isi. Usoro bụ gam akporo 10.
MOTO G EGWU (2021)
IKIRU 6.4-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi (1.600 x 720 pikselụ)
Nhazi Snapdragon 460
Ohere TERLỌ N'IME 32 GB
Gbanwee CAMERA 13 MP Isi ihe mmetụta / 2 MP Omimi ihe mmetụta
CAMERA N'IHU 5 MP
Njikọ LTE / 4G / Wi-Fi 6 / Bluetooth / GPS
Mbibi na ibu ibu 166 x 76 x 9.3 mm / 204 gram
El Moto G Stylus (2021) ga-abata na otu RAM na nchekwa nhọrọ (4/128 GB) maka $ 299 (Euro 244 na mgbanwe ahụ), Moto G Power (2021) maka dollar 199 (euro 162 na mgbanwe ahụ) yana Moto G Play (2021) maka dollar 169 (euro 138). Moto G Power (2021) dị na Amazon, ebe nnweta nke ndị fọdụrụ ga-abụ na ụbọchị ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola na-ekwuputa Moto G Stylus (2021) ọhụrụ, Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021)
Dentures & Demons 2 winks na Lucasarts 'na-ejide ihe ọhụụ